2010 2011 Ultimate Software Guide for Windows Users - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
2010 2011 Ultimate Software Guide for Windows Users
07-07-2010, 04:51 AM
Password For All Applications = www.myanmarfamily.org
ကျွန်တော် ဒီရက်ပိုင်း ဖိုရမ်ထဲ သိပ်မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး - အကြောင်းက စုဆောင်းမှုနဲ့ အသေးစိတ် ပြင်ဆင်မှုလေး တစ်ခု လုပ်နေလို့ပါ - ကျွန်တော်တို့တွေ ခုဆိုရင် ကွန်ပြူတာနဲ့ ထိတွေ့ပြီး လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကစလို့ ဖျော်ဖြေမှုအဆုံး နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကွန်ပြူတာကို အသုံးချနေကြပြီ ဆိုကြပါစို့ - တစ်ချို့လည်း ကွန်ပြူတာနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တာကြာ - ဒါမှမဟုတ် လေ့လာမှု အားကောင်းလို့ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမြဲ ပေါ့ပါးမြန်ဆန်နေအောင် ဘာတွေ လုပ်ရမယ် - ဘာလို Software မျိုးတွေ သုံးရမယ် - ဘယ်လို Maintenance မျိုးတွေ လုပ်ဆောင်ရမယ် ဆိုတာကို သိကြပေမယ့် တစ်ချို့ကျ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာကို သုံးလို့ဖြစ် ပြီးရော ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားပြီး လက်လွတ်စပယ် အသုံးပြုနေကြတာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ တွေ့ရပါတယ်။ ပစ္စည်းဆိုတဲ့ အရာမျိုးက တန်ဖိုးကြီးကြီး ငယ်ငယ် ကိုယ်က တန်ဖိုးထားပြီး စည်းကမ်းရှိရှိ ဂရုစိုက်နိုင်မှ အသုံးခံတာ မျိုးပါ။ ပစ္စည်းတွေ အားလုံးထဲမှာ တန်ဖိုးအားဖြင့်လည်း မသေးငယ်သလို ဖျော်ဖြေရေး ဆိုင်ရာမှာပဲ ကြည့်ကြည့် - လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု ပိုင်းမှာပဲ ကြည့်ကြည့် အလွန်အသုံးဝင်လှတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာတွေ ဆိုတာကတော့ မဖြစ်မနေ ဂရုစိုက်ကို စိုက်ရမယ့် အရာတွေထဲမှာ မလွဲမသွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ကွန်ပြူတာတွေ အတွက် ဘယ်လို ဂရုစိုက်ကြမလဲ ??
ကွန်ပြူတာကို စည်းကမ်းရှိရှိသုံးပါ ဆိုတဲ့ စကားကို လူတိုင်း နားလည်ကြပေမယ့် ဘယ်လို စည်းကမ်းစနစ်တကျ သုံးရမယ် ဆိုတာကိုတော့ လူတော်တော်များများနားမလည်ကြပါဘူး - ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးကို Maintenance လုပ်တယ်ဆိုတာကို လူတော်တော်များများ နားလည်ကြတာက သုံးတာကြာပြီး စက်လေးလာမှ ဟို Software လေး သုံး - ဒီ Software လေးသုံးပြီး လိုက်ပြင်တာလို့ ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့ အယူအဆက တော်တော်လေးကို မှားတာပါ - ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးဟာ စတင်ဝယ်ယူဖို့ ပြန်ဆင်ချိန်ကစလို့ Fresh Windows တစ်ခုကို တင်ပြီး နောက်ဆုံး Software တွေ install လုပ် အသုံးချတဲ့ အထိ အားလုံး စနစ်တကျ စီစဉ်နိုင်မှ မိမိလိုလားချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးကို ရေရှည်စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ အသုံးချနိုင်တာမျိုးပါ။
ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးကို အမြဲတမ်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်ပေါင်းများစွာ ရှိနေပေမယ့် သူတို့အားလုံးရဲ့ ကြားထဲမှာ အဓိကအကျဆုံး အချက်တစ်ချက် ရှိနေပါတယ်။ အဲတာကတော့ မိမိကွန်ပြူတာနဲ့ မိမိလိုအပ်ချက် နှစ်ခုစလုံးအတွက် ကိုက်ညီနိုင်မယ့် Applications ရွေးချယ်မှု အပိုင်းပါ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီ ပို့စ်မှာ Windows Users တိုင်းအတွက် Fresh Windows တစ်ခု install လုပ်ဆောင်အပြီး မိမိတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်အလိုက် အခြေခံအားဖြင့် အသုံးပြုသင့်တဲ့ Applications ကောင်းတွေရဲ့ နောက်ဆုံး Versions တွေကို ရှာဖွေစုဆောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးဟာ 2010 2011 အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ Versions တွေချည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Versions တွေကတော့ နောက်ဆုံး Versions မဟုတ်ပါဘူး - နောက်ဆုံး Versions နား ပတ်ဝန်းကျင်က အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ Error အနည်းဆုံး Versions သို့တည်းမဟုတ် သူ့နောက်မှာ နောက်ထက် Versions အသစ် ထပ်မထုတ်တော့တဲ့ Applications တွေဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ လတ်တလော Fresh install လုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံး လက်ထဲမှာ ရှိနေပြီလို့ ယူဆလိုက် ပါမယ်။ သူ့ကို လိုအပ်တဲ့ Applications တွေထည့်သွင်းပြီး အခန့်သင့် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဘယ် Applications တွေကို အစဉ်လိုက် install လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာ တစ်ဆင့်ချင်း ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။
Windows installation လုပ်ဆောင်ပြီးချိန်မှာ ပထမဆုံး မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သင့်တာ သက်ဆိုင်ရာ Motherboard drivers တွေ VGA Driver တွေ install လုပ်ဆောင်ဖို့ပါ။ မိမိကွန်ပြူတာရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Drivers တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Windows7အတွက် နောက်ဆုံးထွက် Drivers တွေ Download ရယူနိုင်မယ့် နေရာကို ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ သူ့နောက်မှာ လုပ်ဆောင်သင့်တာကတော့ Windows Vista နဲ့ Windows7Users တွေအတွက် Control Panel \_ Performance Information and Tools အောက်က Windows Experience Index base score ကို စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
Windows Experience Index ဆိုတာက ကိုယ့်ကွန်ပြူတာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ hardware နဲ့ software တွေရဲ့ လက်ရှိ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တွေကို တိုင်းတာ စစ်ဆေးပေးတဲ့ ညွှန်းကိန်းဖြစ်ပြီး Component ( ၅ ) မျိုးကို တိုင်းတာစစ်ဆေးပါတယ်။ အဲဒီ့ Component ( ၅ ) မျိုးကတော့ Processor - Memory ( RAM ) - Graphics - Gaming graphics - Primary hard disk တို့ ဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီကနေ သူ စစ်ဆေးလို့ ရလာတဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ ကိန်းဂဏန်းတွေထဲက အငယ်ဆုံး ကိန်းဂဏန်းကို ယူပြီး Windows Experience Index base score ( ကွန်ပြူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ပြ အခြေခံညွှန်းကိန်း ) ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီဂဏန်းတွေ ဘာကို ရည်ညွှန်းသလဲ ဆိုရင် subscore နိမ့်တာနဲ့ အမျှ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဟာ သိသိသာသာ နှေးကွေးလေးလံမယ် ဆိုတာ ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီး subscore မြင့်တာ နဲ့ အမျှ ကွန်ပြူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြန်ဆန်မြင့်မားမယ် ဆိုတာကို ဖော်ကျူးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိစက်မှာ ရှိတဲ့ Windows Experience Index base score ကို စစ်ဆေးဖို့ အတွက် ဖော်ပြပါ Update my score ကို click ပေးရပါမယ်။
ဖော်ပြပါ Hardware component တစ်ခုချင်းစီမှာ သီးခြား subscore တစ်ခုစီရှိပြီး ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာ ကွန်ပြူတာရဲ့ Windows Experience Index base score ဆိုတာ အဲ့ဒီ့ Hardware component တစ်ခုချင်းစီက ရလာတဲ့ subscore အားလုံးထဲက အနိမ့်ဆုံး subscore ကို ရွေးယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါပုံမှာ ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကွန်ပြူတာရဲ့ Subscore အနိမ့်ဆုံးဟာ 4.7 ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျန်တဲ့ Components တွေ အားလုံးဟာ5ကျော်ပေမယ့် ကွန်ပြူတာရဲ့ Windows Experience Index base score မှာတော့ 4.7 ပဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ( Base score ဟာ Components တွေ အားလုံးက ရလာတဲ့ subscore တွေအားလုံးကို ပေါင်းပြီး Average ရှာထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ) ဒါကြောင့် ဆိုလိုတာ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ Processor ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း RAM မကောင်းရင် - Hard disk မကောင်းရင် သို့တည်းမဟုတ် Graphics မကောင်းရင် Windows Experience Index က ကျနေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Windows Experience Index ကို ကြည့်ပြီး ကွန်ပြူတာတစ်လုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ဘယ်လောက်ထိ မြင့်မားတယ်ဆိုတာ အလွယ်နည်းနဲ့ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်း လည်းကောင်း ကိုယ့်ကွန်ပြူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လက်ရှိအခြေအနေထက် မြှင့်ချင်ပြီဆိုရင်လည်း ဖော်ပြပါ Windows Experience Index မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Components တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Subscore ကိုကြည့်ပြီး ဘယ် Components တွေကို မြှင့်ဖို့လိုမယ် ဆိုတာ အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် သုံးသပ်မယ် ဆိုရင် Windows Vista နဲ့ Windows7သုံးထားတဲ့ ကွန်ပြူတာတိုင်းဟာ အနိမ့်ဆုံး Windows Experience Index base score3နဲ့3အထက် ( 4,5.... ) စသဖြင့် ရထားဖို့ လိုပြီး -3ထက် နိမ့်နေမယ် ဆိုရင်တော့ နိမ့်နေတဲ့ Hardware Components ကို အတတ်နိုင်ဆုံး မြှင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် base score အနည်းဆုံ3းရထားတဲ့ ကွန်ပြူတာသာ Windows Vista -7မှာပါတဲ့ Windows Aero နဲ့ new features တွေကို Run နိုင်ဖို့ အခြေခံအား ဖြင့် ပြည့်စုံတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပြီး base score4ဒါမှမဟုတ်5နဲ့ အထက် ရထားမှ new features အားလုံးကို စွမ်းအားပြည့် Run နိုင်မယ်လို့ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် သုံးသပ်လို့ ရပါတယ်။ Windows Experience Index base score3အောက်ကို ရောက်နေမယ် ဆိုရင်တော့ Hardware Components ကို မြှင့်နိုင်ရင် မြှင့် မမြှင့်နိုင်ရင် Windows ပြောင်းသုံးဖို့ စဉ်းစားရပါ လိမ့်မယ်။ ပြောင်းသုံးဖို့ မစဉ်းစားပဲ ပေကပ်ပြီး သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိအသုံးပြုတာ ကြမ်းရင် ကြမ်းသလို စက်မှာ ပြဿနာ တစ်ခုမဟုတ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
1. Windows Activators
Windows Experience Index base score စစ်ဆေးပြီးတဲ့ နောက်မှာ မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်သင့်တာ နောက်တစ်ခုက ကိုယ့် Windows နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Activations ကဏ္ဍပါ။ Windows XP မှာတော့ တော်တော်များများ Genuine ဖြစ်ပြီးသားတွေ သုံးကြတာများလို့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ Windows Vista နဲ့ Windows7အတွက်ပဲ Activators တွေရယူနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပါဝင်မည့် Software များ
Windows7Activator Software -Windows7Loader v1.8.8
2010 2011 MF Collection - Act for Win.rar
Windows Activation ကဏ္ဍလုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ Windows ထဲမှာ အသုံးချဖို့အတွက် Applications ရွေးချယ်မှုပိုင်း ကို စတင်ပါမယ်။ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ - ကွန်ပြူတာ ရှိတယ် - လက်တစ်ကမ်းမှာ အင်တာနက် ရှိတယ် - ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆို Browsers တွေ တင်သင့်ပါတယ်။ Browsers တွေဟာ အမျိုးအစားတော်တော်များတဲ့ အပြင် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကလည်း စွမ်းဆောင်ရည် - ပါဝင်တဲ့ features နဲ့ Add-ons စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်မှု ဆိုတာတွေ ကွာခြားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူသုံးများပြီး Stable ဖြစ်တာ နောက် Add-ons အများအပြား အသုံးချနိုင်တဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး လူကြိုက်များတဲ့ Browsers လေးခုကတော့ Windows မှာ နဂိုတည်းက ထည့်သွင်းပါရှိပြီးသား ဖြစ်တဲ့ Internet Explorer, နောက် သပ်သပ် install လုပ်ရတဲ့ Mozilla firefox, Google Chrome နဲ့ Opera တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာ Google Chrome ဟာ Speed အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး Mozilla Firefox ကတော့ မြန်မာ fonts နဲ့လည်း အဆင်ပြေ Speed လည်းမဆိုးတဲ့ Browser ပါ။ Internet Explorer ကလည်း အရင်တုန်းက သိပ်မစွံပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း Internet Explorer 8 ထွက်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ Speed လည်း မဆိုးတော့သလို Features လေးတွေလည်း ပိုစုံလာပြီး သုံးလို့ တော်တော်လေး ပိုကောင်းလာပါတယ်။ Opera ကတော့ ခုနောက်ပိုင်း တော်တော်လေး လူကြိုက်များ သတိထားမိလာတဲ့ Browser တစ်ခုပါ။ သူ့အသုံးဝင်ပုံ တစ်ချို့ကို ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ဖော်ပြထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ Browsers install လုပ်ပြီးတိုင်းလည်း အဆင်ပြေမသွားသေးပါဘူး - Youtube တို့ ဘာတို့ ကြည့်ဖို့ အတွက်ဆို Flash Players တွေ ထည့်သွင်းဖို့လိုပါသေးတယ် - အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းက ရနိုင်အောင် နောက်ဆုံး Versions တွေ အားလုံး ကျွန်တော်စုပေးထားပါတယ်။ ခုချိန်မှာ နောက်ဆုံး Versions ဆိုပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်မှာ သူတို့လည်း အဟောင်း ဖြစ်သွားဦးမှာပါပဲ - အဲ့ အတွက်တော့ http://www.filehippo.com မှာ ဘယ် Versions တွေ ကို ရောက်နေပြီ လဲဆိုတာ စစ်ဆေးကြည့်နေဖို့ လိုပါတယ်။ Google toolbar ကတော့ Google user တိုင်းအတွက် သုံးသင့်တဲ့ toolbar တစ်ခုမို့လို့ ထည့်ပေးထားတာပါ။ Google toolbar ရဲ့ အားသာချက် အကြောင်းကို ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
Firefox Setup 3.6.6.exe
2010 2011 MF Collection - Browsers.rar (46.5 MB)
မိမိနှစ်သက်ရာ Browsers တွေ တင်ပြီးသွားပြီ - ဒါဆို နောက်တစ်ခု တင်သင့်တာ ကောင်မလေးနဲ့ အိမ်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောဖို့ Chat Software တွေ တင်ထားသင့်ပါတယ်။ လက်ရှိ ဒီစာကို ရေးနေတဲ့ အချိန်ထိ အားလုံး နောက်ဆုံး Versions တွေချည်း ဖြစ်ပါတယ်။
2010 2011 MF Collection - Chatting.rar (44.7 MB)
3. Myanmar fonts
Browsers တင်ပြီးပြီ - Chatting နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Software တွေ တင်ပြီးပြီ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာစာဖတ်လို့ ရဖို့ မြန်မာလိုရိုက်လို့ ရဖို့ မြန်မာ fonts တွေ စက်မှာ တင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့် Browsers - Chatting နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Software တွေတင်ပြီးမှ Myanmar fonts တွေကို တင်ရသလဲ ?? ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် တကယ်လို့ Zawgyi 2008 installer ကို တင်ပြီးမှ Gtalk စသဖြင့် တင်တဲ့ အခါ မြန်မာ fonts မမြင်ရတာ - မြန်မာ fonts မြင်ရပေမယ့် မြန်မာလို ရိုက်မရတာ စသဖြင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Browsers - Chatting နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Software တွေတင်ပြီးမှ Myanmar fonts တွေကို တင်တာပါ။ ကျွန်တော် ခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ မြန်မာ fonts တွေဟာ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် သေသေချာချာ စီစစ် ရွေးချယ်ပြီးတော့မှ တင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Fonts ဆိုရင် Users တော်တော်များများက လိုအပ်သည် ဖြစ်စေ မလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ မဟားတရား အများအပြားတင်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်။ အဲတာမှားပါတယ်။ တကယ်တော့ Fonts ဆိုတာ ကိုယ် တကယ်အသုံးပြုတာထက် မလိုအပ်ပဲ ပိုပြီး တင်မယ် ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာအလိုက် Applications တစ်ခုခုကို ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့် စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ fonts အရေအတွက် အားလုံးကို Applications က ဆွဲယူနေရလို့ လိုအပ်တာထက် Applications စတင်ချိန် ပိုကြာမြင့်နိုင်သလို စက်ကို နှေးကွေးလေးလံမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သာမန် အသုံးပြုသူ users တွေအနေနဲ့ တစ်ခြား fonts တွေကို အသုံးမပြုပဲ ကျွန်တော် အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ fonts လေးလောက်ကိုပဲ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အသုံးပြုကြည့်ပါ။ website တော်တော်များများက စာအားလုံးနီးပါး ဖတ်လို့ ရဖို့ အာမခံပါတယ်။
MMFonts Collection ( ဤ fonts များအား Control panel အတွင်းရှိ fonts folder အတွင်းသို့ဦးစွာ Copy>Paste လုပ်ပါ။ )
Zawgyi 2008 ( ထို့နောက် Zawgyi 2008 အား install လုပ်၍ Restart ပေးပါ။ )
2010 2011 MF Collection - MM Fonts.rar (2.96 MB)
4. IDownMan 6.03 Beta 14.rar (6.9 MB)
Browsers တင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ နောက်ထပ်တင်ထားသင့်တာ Download Manager တစ်ခုခုပါ - ကျွန်တော်ကတော့ Downloader တွေထဲမှာ Internet Download Manager ကို သဘောကျပါတယ်။ Browsers တင်ပြီးရင် ဘာကြောင့် Internet Download Manager ကို တင်သင့်သလဲ ?? ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် တကယ်လို့ ကိုယ်သုံးနေကျ Browser ( ဥပမာ - Mozilla Firefox ) မတင်ရသေးခင် Internet Download Manager ကို တင်လိုက်တဲ့ အခါ Internet Download Manager နဲ့ အတူပါလာတဲ့ Internet Download Manager Integration Module ဟာ သူနဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ့် Mozilla Firefox ကို မတွေ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် Mozilla Firefox ရဲ့ Extensions မှာ မချိတ်ဆက်နိုင်ပဲ နောက်ပိုင်း Mozilla Firefox တင်ပြီးတဲ့ အချိန် Download ချတဲ့ နေရာမှာ Internet Download Manager တင်ထားပြီး IDM နဲ့ ကျမလာဘူးဆိုတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတတ် ပါတယ်။ အဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် Internet Download Manager > Options > General > Use advanced browser integration ကို select ပေးပြီး Computer ကို Restart ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို အရှုပ်အရှက်တွေ ကင်းအောင်လို့ Browsers တင်ပြီးမှ Internet Download Manager ကိုတင်ဖို့ စီစဉ်ရတာပါ။
IDownMan 6.03 Beta 14.rar (6.9 MB)
5. ACDSee Photo Manager 12.0.342
ကျွန်တော်တို့ စက်ထဲမှာ ဓာတ်ပုံတွေ ရှိတယ် - သူတို့တွေကို ကြည့်ဖို့ Windows မှာ Built-in image viewer ပါလာတာလည်း သိတယ်။ ဒါပေမယ့် Windows မှာပါတဲ့ Built-in image viewer ဆိုတာ သိပ်ပြီး အသုံးမတည့်လှပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခြား Image Viewer တစ်ခုခုကို ပြောင်းသုံးဖို့ လိုပါတယ်။ လူကြိုက်များပြီး အသုံးတည့်တာကတော့ ACDSee Photo Manager ပါ။ ACDSee Photo Manager ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာထဲက ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေယုံမျှ မက လိုအပ်တဲ့ တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်မှုတွေ အတွက်လည်း သူ့ Software ထဲမှာတင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Application ကောင်းတစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ACDSee Photo Manager တစ်ခုတည်း သုံးလို့ ကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး - သူ့လိုမျိုး အသုံးတည့်ပြီး စွယ်စုံသုံးလို့ ကောင်းတဲ့ နောက်ထပ် Image viewer တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ သူ့နာမည်ကတော့ Picasa ပါ။ Google က ထုတ်တဲ့ Picasa ဟာ Free ပေးယုံမျှမက Online နဲ့ပါ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီး Picasa webalbum ရှိရာဆီ ကိုယ့်ဓာတ်ပုံတွေကို Google account ကနေ တစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် Upload တင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သလို - Blogger အသုံးပြုသူတွေ အတွက်လည်း မိမိရဲ့ Blogspot ရှိရာဆီ Picasa ကနေ တစ်ဆင့် Photos တွေကို Posts အဖြစ်နဲ့ တင်နိုင်ပါသေးတယ်။
ACDSee Photo Manager 12.0.342 + Serial
2010 2011 MF Collection - ACD Photo.rar (56.2 MB)
2010 2011 MF Collection - Picasa3.rar (8.8 MB)
6. Adobe Acrobat9PRO (v2.00.20) + PATCH 9.2.0.0.20
အင်တာနက် ထဲကနေ သတင်းစာတွေ - ကာတွန်းတွေ - ရုပ်ပြတွေ - ဝတ္ထုတွေ - ဂျာနယ်တွေ Download ချလိုက်တယ် - များသော အားဖြင့် ဘယ် Format နဲ့ကျပါသလဲ ဟုတ်ကဲ့ pdf နဲ့ ကျပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ချင်တဲ့ သတင်းစာတွေ - ကာတွန်းတွေ - ရုပ်ပြတွေ - ဝတ္ထုတွေ - ဂျာနယ်တွေကို အဆင်ပြေပြေ ဖတ်နိုင်ဖို့ PDF Reader တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ စက်ထဲမှာ ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ PDF Reader အမျိုးအစား များစွာ အင်တာနက် ထဲမှာ ရှိပေမယ့် လူသုံးများပြီး အသုံးပြုဖို့ အဆင်ပြေတာ Adobe Acrobat Reader ပါပဲ။ Adobe Acrobat Reader ကို Free နဲ့ Professional လို့ ခွဲခြားထားပြီး Free ပေးတဲ့ Adobe Acrobat Reader က သာမန် PDF file တွေကို စာဖတ်ယုံလောက် သုံးသူတွေ အတွက် အသုံးပြုဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။ PRO အထိ တင်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ Professional ကတော့ PDF နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြင်ဆင်ချင်တဲ့ သူတွေ ထပ်ပေါင်းဖြည့်ချင် ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် သုံးရမယ့် Software ပါ။ ကိုယ်က ဘယ်လို PDF Reader ကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သုံးမှာလဲ ဆိုတာ မူတည်ပြီး Free နဲ့ Professional ကို ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ Adobe Acrobat Reader Free Version ကို http://www.filehippo.com မှာပဲ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နောက်တစ်ချက် စဉ်းစားစရာ ရှိလာတာက ခုနောက်ပိုင်းမှာ Adobe Acrobat Reader နဲ့ အပြိုင် လူသုံးများလာတဲ့ နောက် PDF Reader တစ်မျိုးပါ။ သူ့နာမည်ကိုတော့ Foxit လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Foxit Reader က ဘာကြောင့် နာမည်ရလာသလဲ ?? ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် Adobe Acrobat Reader ဟာ Windows ထဲမှာ installed လုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ 200MB ကျော်ကျော် HD ပေါ်မှာ နေရာယူပါတယ်။
Foxit Reader ကတော့ installed လုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ Hard disk ပေါ်မှာ သူနေရာယူတဲ့ ပမာဏက 10MB မပြည့်ပါဘူး - ဒါက Foxit နဲ့ Adobe Acrobat ကြားက အကြီးမားဆုံး ကွာခြားချက်ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သာမန် PDF file တွေကို စာဖတ်ယုံလောက် အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ Adobe Acrobat အစား Foxit ကို အသုံးပြုကြည့်ကြဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Adobe Acrobat9PRO (v2.00.20) + PATCH 9.2.0.0.20 ဆိုတာကတော့ PDF နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြင်ဆင်ချင်တဲ့ သူတွေ ထပ်ပေါင်းဖြည့်ချင် ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
2010 2011 MF Collection - Adb Abat.part1.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Abat.part2.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Abat.part3.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Abat.part4.rar (57.9 MB)
ကွန်ပြူတာ သုံးတယ်ဆိုတာ အလုပ်လုပ်ဖို့ စာကြည့်ဖို့ တစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားလပ်ချိန်တွေ အတွက် ဖြေဖျော်ရေး တာဝန်ကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ ဒီ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် Windows ထဲမှာ Windows Media Player ဆိုပြီး ပါဝင်ပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း နယ်ပယ် အသီးသီးက အသုံးပြုနေကြတဲ့ Audio နဲ့ Video Formats တွေ အတွက်တော့ Windows Media Player က ကောင်းကောင်း ဖွင့်မပေးတတ်ပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ရလာတဲ့ Audio နဲ့ Video files အားလုံးကို plug-in အသစ်ရှာ - players အသစ်ရှာစရာ မလိုပဲ ဖွင့်ပေးနိုင်မယ့် player တစ်ခုလောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ စက်ထဲမှာ မဖြစ်မနေ ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ Players ပေါင်းမြောက်များ စွာ ရှိပေမယ့် သူတို့အားလုံးရဲ့ ကြားထဲမှာ ခပ်တုံးတုံး style နဲ့ ထိုးဖောက်လာတဲ့ player တစ်ခုကတော့ vlc player ပါပဲ။ အမြင်ရိုးရှင်းပြီး အပြင်အဆင် သိပ်ဦးစားမပေးထားတဲ့ vlc player ဟာ အမြင်ဆန်းပြီး အလှအပများတဲ့ တစ်ခြား player တွေထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သွားတဲ့ တစ်ချက်က တော်ယုံ တန်ယုံ ဘယ်လို Audio - Video Formats မျိုးကိုပဲ ဖြစ်ပါစေ ဖွင့်လို့ ရတဲ့ အားသာချက်ပါ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ကိုယ့် အကြိုက်ကိုချည်းပဲ ဦးစား မပေးချင်လို့ တစ်ခြား သူတွေအကြိုက်လေး တွေလည်း ပါအောင် အောက်ဖော်ပြပါ Players တွေကိုပါ ထပ်မံထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ vlc player ပြီးရင် အဲ့ဒီ့ players တွေကလည်း လူသုံးများ လူကြိုက်များတဲ့ players တွေပါပဲ။
2010 2011 MF Collection - Players.rar (56 MB)
2010 2011 MF Collection - PDVD.part1.rar (66.8 MB)
2010 2011 MF Collection - PDVD.part2.rar (51.2 MB)
8. Adobe Pagemaker 7.0 + Serial No
Adobe Pagemaker ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကွန်ပြူတာနဲ့ စာစီစာရိုက် တစ်ခေတ် စတင်ဆန်းသစ်ခါစက တော်တော်လေး လူသုံးများခဲ့တဲ့ Software ပါ။ နောက်ပိုင်း Adobe Pagemaker ကို နောက်ဆုံး Version 7.0 မှာရပ်ပြီး Version အသစ် ဆက်မထုတ်တော့ပဲ Adobe Pagemaker အစား Adobe Indesign ဆိုတဲ့ နာမည်သစ်နဲ့ အသွင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများကတော့ အသစ်တွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းပြောင်း အဟောင်းလေးကိုပဲ အစွဲအလမ်းကြီးစွာနဲ့ အသုံးချနေကြဆဲပါ။ အဲလို လိုအပ်သူတွေ အတွက် အသုံးချနိုင်အောင် 2010 2011 Ultimate Software Guide ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ ဘယ်တော့မှ အသစ်ထပ်မထွက်တော့တဲ့ ဒီ Adobe Pagemaker နောက်ဆုံး Version လေးကို ကျွန်တော် ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Adobe Pagemaker 7.0 + Serial No
2010 2011 MF Collection - Adb Pager.part1.rar (71.5 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Pager.part2.rar (57.4 MB)
9. Microsoft Office 2010 Professional Plus x64 and x86 14.0.4743.1000 Full Activated
စာစီစာရိုက်တစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ပဲ ဘက်စုံသုံး ရုံးသုံး ကျောင်းသုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံး - နယ်ပယ်စုံမှာ အသုံးချဖို့ သင့်တော်တဲ့ နောက်ထပ် မရှိမဖြစ် မသုံးမဖြစ် အသုံးပြုရမယ့် Applications ကောင်း တစ်ခုကတော့ Microsoft Office 2010 ပါ။ Microsoft Office 2010 နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အရင် Versions တွေနဲ့ စာရင် ဘာတွေ ကောင်းလာသလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးထားခဲ့ဖူးတာ ရှိပါတယ်။ ဒါတင်မက Microsoft Office 2010 ကိုပဲ ဒီနေရာမှာ တစ်ခါ တင်ထားပေးပြီးသား ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ Microsoft Office 2010 က 32bit တစ်ခုတည်း အတွက်ပါ။ ဒီ Microsoft Office 2010 ကတော့ 32bit ရော 64bit ရော အတွက်ပါ။ နောက်ပြီး ဒီ Microsoft Office 2010 Professional Plus x64 and x86 14.0.4743.1000 က အရင် ကျွန်တော် တင်ပေးဖူးတဲ့ Microsoft Office 2010 လို မဟုတ်ပါဘူး - ဒီ Microsoft Office 2010 ဟာ Full Activated လုပ်ဆောင်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part01.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part02.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part03.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part04.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part05.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part06.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part07.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part08.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part09.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part10.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part11.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part12.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part13.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part14.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - MO FULL.part15.rar (37.3 MB)
Last edited by KznT; 18-04-2011 at 05:50 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 58 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုဦး, ခွန်ညီး, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ညီညီဇော်, ပုထုဇဉ်, မိုးကျော်ခမ်း, လူမုန်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဦးသာကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်တေဇာဝင်း, အေးမင်းမောင်, မြင့်မိုရ်, မြတ်သူအောင်, နိုးတူး, နှင်း, amaung344, arkaraung, Arker Min Myat, athaylay1, aungphyo, aungzawoopde, AZM, azp09, bagothar85, bonge, Emc Arkar, hellboy, internal, ko myo, Ko-Naing, kyawswarl, KZaw, minthumon, mr.kohtun, phoetharlay, phyuphyukyaw, PoeHapGyi, sailay, sawjonnie, Thein Than, theinzaw5949, thetzin, thighwanna, thureinsoe, tu tu, udku, wahgyi, yawnathan, yumaung, zo
ပြန်စာ - 2010 2011 Ultimate Software Guide for Windows Users
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ဆီမှာ အရင်ကတော့ Multiupload ကအလုပ်လုပ်ပြီး သုံးလို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် KznT တင်ပေးတဲက Multiupload က မပွင့်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ KznT တင်ပေးတဲ့ Software တွေအားလုံး ကျွန်တော်စက်မှာ တင်ထားပါတယ်။ အဆင်မပြေတာက Pdvd-10 ပါ။ ကျွန်တော်ဒေါင်းထားတာ ဆိုဒ်(၅)ခုလောက်ကနေ (၅)ခါဆွဲပြီးသုံးထားတာပါ။ လိုင်စင်ကီးအဆင်မပြေပါ။ ရက်(၃၀)ပဲရပါတယ်။ KznTတင်ပေးတဲ့ Pdvd-10 များအဆင်မပြေလားလို့ဆွဲကြည့်တာပါ။ ကျွန်တော် အဆင်ပြေမယ့် Key လေးရရင်ကျေနပ်ပါပြီ။ Key လေးကူညီလို့ရရင် ကူညီပေးပါ။
10. Adobe Photoshop CS5 Extended Edition
လူတိုင်းက ဗွီဒီယို အရိုက်ခံဖို့သာ ဝါသနာ မပါကြတာ - ဓာတ်ပုံကို လှတပတ အရိုက်ခံရမယ် ဆိုရင်တော့ တော်တော်များများ ဝါသနာပါကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ကိုယ့်မိသားစု - ကိုယ့်သူငယ်ချင်း - ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံဆိုပြီး ဓာတ်ပုံတွေ မနည်းမနောလည်း ပိုင်ဆိုင်လာကြပြီ - ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးထဲမှာ မကောင်းတာတွေလည်း ရှိမယ် ကောင်းတာတွေလည်း ရှိမယ် - နှစ်တွေ ကြာလို့ပျက်စီးလု ဆဲဆဲ ဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေလည်း ရှိမယ်။ ပင်ကိုယ်အလှကို ကွန်ပြူတာနဲ့ Effect လေးထည့်ပြီး ပြင်ဆင်ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလည်း ရှိမယ်။ စသဖြင့် အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းကနေ ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ဆို တန်ဖိုးမြင့်ပြီး အလွန်အသုံးဝင် လူကြိုက်များတဲ့ Software တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲတာကတော့ လူတိုင်း သိကြတဲ့ Photoshop ပါ။ တစ်ခု သတိပေးချင်တာ ဒီလို Software တွေက Software အကြီးစားမျိုးထဲမှာပါပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တကယ်အသုံးမလိုပဲနဲ့ စက်ထဲမှာ Install လုပ်ဆောင်မထားဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
ပါဝင်မည့် Software များ
( Adobe Product CS5 Portable လိုချင်သူများ ဒီနေရာမှာ ကို kyaukphyu တင်ပေးထားတာ ရှိပါတယ်။ )
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part01.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part02.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part03.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part04.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part05.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part06.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part07.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part08.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part09.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part10.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part11.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part12.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part13.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - Adb Shop.part14.rar (48.4 MB)
11. Xilisoft Video Converter Ultimate 6.0.5.0624
ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေက Formats မတူလို့ ဖွင့်မရတာ - Formats တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ပြောင်းချင်တာတွေ အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိတာ စသဖြင့် ပြဿနာ မကြာခဏ ကြုံဖူးကြမှာပါ - ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက်ကတော့ Converter ကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ သူကတော့ Xilisoft Video Converter ပါ။
2010 2011 MF Collection - Xili.rar (29.5 MB)
သူကတော့ အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့ မလိုတဲ့ လူအတော်များများ အသုံးပြုနေပြီးသား Archiver တစ်ခုပါ။ ခုတင်ပေးထား တာကတော့ သူ့ရဲ့ လတ်တလော နောက်ဆုံး Version ဖြစ်ပါတယ်။
Winrar_4.00_final_activated.rar (5 MB)
13. Virtual Drive Pro 12 + Keygen
ဂိမ်းသမားတွေ - ISO files တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Software တွေကို Virtual Drive ကနေ install လုပ်ဆောင်ချင်သူတွေ - Learning CD တွေကို လေ့လာချင်သူတွေ အတွက် Virtual Drive ဆိုတာ စက်မှာ ရှိထားသင့်ပါတယ်။
Virtual Drive Pro 12 + Keygen
2010 2011 MF Collection - Vdrive.rar (83.3 MB)
14. DAEMON Tools Pro Advanced 4.36.0309 Multilanguage Software
DAEMON tools ဆိုတာလည်း CD/DVD/HD DVD/Blu-ray discs တွေကို “virtual discs” တွေအဖြစ် အသုံးချနိုင်တဲ့ tools ဖြစ်ပါ တယ်။ DAEMON tools မှာ Lite versions လည်း ရှိပြီး သာမန် user တစ်ယောက်အတွက်တော့ DAEMON Tools Lite 4.35.6 ကတင် အသုံးပြုဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ DAEMON Tools Lite versions ကို ဒီနေရာကနေ download ချလို့ ရပါတယ်။
DAEMON Tools Pro Advanced 4.36.0309 Multilanguage Software
2010 2011 MF Collection - Daemon.rar (19.2 MB)
Last edited by KznT; 27-06-2011 at 03:05 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 29 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ခွန်ညီး, ဂတုံးလေး, နီထွန်းဦး, ပုထုဇဉ်, မိုးကျော်ခမ်း, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, နိုးတူး, amaung344, arkaraung, aungzawoopde, AZM, bonge, hellboy, ko myo, minthumon, mr.kohtun, phoetharlay, sawehlor, sawjonnie, tu tu, udku, yawnathan, Ye Aung
ကျွန်တော့ဆီမှာ အရင်ကတော့ Multiupload ကအလုပ်လုပ်ပြီး သုံးလို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် KznT တင်ပေးတဲက Multiupload က မပွင့်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ KznT တင်ပေးတဲ့ Software တွေအားလုံး ကျွန်တော်စက်မှာ တင်ထားပါတယ်။ အဆင်မပြေတာက Pdvd-10 ပါ။ ကျွန်တော်ဒေါင်းထားတာ ဆိုဒ်(၅)ခုလောက်ကနေ (၅)ခါဆွဲပြီးသုံးထားတာပါ။ လိုင်စင်ကီးအဆင်မပြေပါ။ ရက်(၃၀)ပဲရပါတယ်။ KznTတင်ပေးတဲ့ Pdvd-10 များအဆင်မပြေလားလို့ဆွဲကြည့်တာပါ။ ကျွန်တော် အဆင်ပြေမယ့် Key လေးရရင်ကျေနပ်ပါပြီ။ Key လေးကူညီလို့ရရင် ကူညီပေးပါ။
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခြား ဆိုဒ်တွေ ထပ်ပေါင်းတင်ပေးဖို့ စဉ်းစားထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်လည်း သိပ်မအားနိုင်သေးလို့ တစ်ခြား Hosts တွေဆီခွဲ မတင်ပေးနိုင်သေးတာပါ။ Pdvd-10 အတွက် လိုနေတဲ့ Crack file ကိုတော့ အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Versions မတူရင်တော့ အလုပ်လုပ်မလုပ် ကျွန်တော်လည်း တိတိကျကျ မသိပါဘူး - ဒါကြောင့် versions တူတာနဲ့ စမ်းလို့ ရအောင် အပေါ်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ PDVD 10 ကိုပါ နောက် တစ်ခြား ဆိုဒ်တစ်ခုကနေ ကိုအောင်လွင်ဦး အတွက် ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ့မှာ ifile ရော Mediafire ရော ပါတာမို့လို့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ Install လုပ်ဆောင်နည်းကတော့ အထဲမှာ Read me file အနေနဲ့ပါပါတယ်။
Crack file တစ်ခုတည်း လိုချင်တာ ဆိုရင် ဒီအောက်က link ကို Download ချပါ။
Software ရော Crack file ရော လိုချင်တာဆိုရင် ဒီအောက်က link ကို Download ချပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ချစ်သားငယ်လေး, ခွန်ညီး, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ပုထုဇဉ်, ဝင်းကျော်ဦး, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, အောင်လွင်ဦး, amaung344, arkaraung, aungzawoopde, AZM, bonge, hellboy, ko myo, minthumon, phoetharlay, udku, yawnathan
15. Babylon Pro v9.0.0 R30.rar
Babylon ကတော့ သုံးခဲ့တာ တော်တော်ကြာပါပြီ - Dictionary တွေထဲမှာ သုံးလို့ ကောင်းတဲ့ သုံးရလွယ်တဲ့ Software ကောင်းတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်တော့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ အရင် Babylon Version တွေ အများကြီး သုံးဖူးပေမယ့် Crack တွေ မကောင်းလို့ တင်ပြီး ၃ ရက်လောက်ကြာရင် ခဏခဏ Error တက်ပြီး Buy now ပြပါတယ်။ ဒီ Version ကတော့ ကျွန်တော် သုံးလာတာလည်း တော်တော်လေး ကြာပါပြီ - Update ကိုသာ ပိတ်ထားလိုက်ရင် သုံးချင်သလောက်သုံး ကောင်းကောင်း အသုံးခံပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဘာသာ လေ့လာနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံခြားဘာသာနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ Blog တွေ ဖတ်လေ့ ရှိသူတွေ အတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software တစ်ခုပါ။
Babylon Pro v9.0.0 R30.rar	15.350 MB
Babylon Pro v9.0.0 R30.rar 15.350 MB
16. SnagIt 10.0.0 Build 788
Screencapture လုပ်မယ် - ကိုယ် Screenshot လုပ်ထားတာလေးတွေကို လိုတာလေးတွေ ထည့်ပေါင်းပြီး ဟိုဖြည့်ဒီဖြည့် လုပ်မယ် မြှားလေးတွေ စာလေးတွေ -Effect လေးတွေ ထည့်ပြီး ပြင်မယ် - စသဖြင့် Blog ရေးတဲ့သူ - စာရေးဝါသနာ ပါတဲ့သူ - ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို ပုံလေးတွေနဲ့ တွဲပြီး ပြချင်သူတွေ အတွက်ဆို မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software တစ်ခုပါ။
2010 2011 MF Collection - SGit10.rar (42.4 MB)
17. FastStone Capture 6.6 + serial
သူကလည်း Snagit လိုပါပဲ - ဒါပေမယ့် သူက အပေါ့သုံးပါ - စာရေးစရာ တွေ သိပ်မလိုဘူး - Effect တွေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ထည့်ဖို့လည်း စိတ်မဝင်စားဘူး - ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Screenshot လုပ်လို့ ရရင် တော်ပြီ ဆိုတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ ဒီ ကောင်လေးကို ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ သူ့လိုမျိုးပဲ နောက်ထပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးလို့ ကောင်းတဲ့ Screencapture တစ်မျိုးက ScreenHunter ပါ။ ScreenHunter ကို ဒီနေရာကနေ သွားပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။
FastStone Capture 6.6 + serial
2010 2011 MF Collection - Faststone.rar (1.8 MB)
18. Acronis True Image Home 2010 v13 Build6053+serials
ကိုယ့်စက်မှာ ရှိနေတဲ့ အရေးကြီး အချက်အလက် အကြောင်းအရာတွေ လုံခြုံရေးအတွက် ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ ရှိနေတဲ့ ဖိုင်တွေကို Backup လုပ်ထားမယ်လို့ စိတ်ကူးမိရင်တော့ Backup and Recovery Software ပေါင်းများစွာထဲက အလွန်သုံးရလွယ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတာ Acronis True Image ပါပဲ။ စမ်းသုံးကြည့်ရင်းနဲ့ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Software ကောင်းတစ်ခုမို့ လက်လွှတ်မခံသင့်ပါဘူး။
Acronis True Image Home 2010 v13 Build6053+serials
2010 2011 MF Collection - ACR True.part1.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - ACR True.part2.rar (83.1 MB)
19. Paragon Hard Disk Manager 2010 Pro[incl.product key]
သူကတော့ Hard Disk Manager တွေထဲမှာ ကျွန်တော် သဘောအကျဆုံး တံဆိပ်ပါပဲ။ အသုံးပြုရလည်း လွယ်သလို အန္တရာယ်လည်း ကင်းပြီး စိတ်လည်း စိတ်ချရပါတယ်။ Paragon Hard Disk Manager ကနေ အခွေရိုက်ထုတ်ထားတဲ့ BootCD ဆိုတာ ဘယ်အချိန်သုံးသုံး တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေတဲ့ BootCD တစ်ခုပါ။ ကိုယ်တိုင်း စက်ကို ပြင်ဆင်ချင်သူတွေ Hard Disk ကို ကိုယ်တိုင် ပုံစံတကျ Format ပြန်ချချင်သူတွေ အတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software ကောင်းတစ်ခု ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။
Paragon Hard Disk Manager 2010 Pro[incl.product key]
2010 2011 MF Collection - ParaG 10.part1.rar (85.8 MB)
2010 2011 MF Collection - ParaG 10.part2.rar (57.8 MB)
Paragon Hard Disk Manager 2010 Pro 64Bit (incl.product key)
2010 2011 MF Collection - ParaG 2010 Pro 64Bit (incl.product key).rar (143.5 MB)
20. Nero Multimedia Suite 10.0.13100 + key crack TESTED
Nero Multimedia Suite ကတော့ တစ်ခုတည်းနဲ့ အစုံပါတဲ့ Suite လို့ ပြောရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ Burning ROM လည်း ပါတယ်။ တစ်ခြား ဖျော်ဖြေရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ Applications အားလုံးလည်း အသင့်ထည့်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ Nero ဆို Buring ROM အဖြစ်လောက်ပဲ အသုံးပြုကြတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ ဒီ Nero Multimedia Suite ကြီး တစ်ခုလုံးက အရမ်းကြီးလွန်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ Applications တွေကို install လုပ်တဲ့ အချိန်မှာမိမိလိုအပ်တာကိုပဲ ရွေးတင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘူး Nero အစား တစ်ခြား Burner တစ်ခုခု ကို သုံးကြဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
Nero Multimedia Suite 10.0.13100 + key crack TESTED
2010 2011 MF Collection - Nro Multi.rar (292.6 MB)
2010 2011 MF Collection - Nro Multi.part1.rar
2010 2011 MF Collection - Nro Multi.part2.rar
2010 2011 MF Collection - Nro Multi.part1.rar (47.7 MB)
2010 2011 MF Collection - Nro Multi.part2.rar (47.7 MB)
2010 2011 MF Collection - Nro Multi.part3.rar (47.7 MB)
2010 2011 MF Collection - Nro Multi.part4.rar (47.7 MB)
2010 2011 MF Collection - Nro Multi.part5.rar (47.7 MB)
2010 2011 MF Collection - Nro Multi.part6.rar (47.7 MB)
2010 2011 MF Collection - Nro Multi.part7.rar (6.7 MB)
Last edited by KznT; 14-04-2011 at 07:33 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 43 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုဦး, ခွန်ညီး, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ပုထုဇဉ်, ဖက်တီး, မထက်, မိုးကျော်ခမ်း, လူမုန်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဦးသာကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်ကို, အေးမင်းမောင်, နိုးတူး, amaung344, arkaraung, aungphyo, aungzawoopde, AZM, bonge, Emc Arkar, hellboy, htoo war, ko myo, kyaukphyu, minthumon, mr.kohtun, phoetharlay, sawjonnie, tu tu, udku, wunna313, yawnathan, Ye Aung, zo
10-07-2010, 02:28 AM
21. MagicISO+PowerISO+UltraISO+WinISO+IsoBuster [All-In-One]
Nero Multimedia Suite ကို ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ပါပြီ - မြန်မာနိုင်ငံက ကွန်ပြူတာ သုံးတဲ့သူ တော်တော်များများကလည်း Burning ROM ဆို Nero လောက်ကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးထိုးပြကြပါတယ်။ အခွေရိုက်ချင်တယ် ဘာသုံးရမလဲ - တစ်ယောက်ကို မေးလိုက်တယ် - Nero ! ဓာတ်ပုံလေးတွေ အခွေရိုက်ထားချင်လို့ ဘာသုံးရမလဲ - မေးလိုက်တယ် - Nero ! ISO လုပ်ချင်လို့ ဘာသုံးရမလဲ - Nero ! - Windows ခွေ ရိုက်ထားချင်လို့ ဘာသုံးရမလဲ - Nero ! အားလုံးက Nero ဆိုတာချည်းပါပဲ - Nero မကောင်းဘူး မဟုတ်ဘူးလား - ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းပါတယ်။ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Nero ဟာ Functions အရမ်းများတဲ့ အတွက်ကြောင့် မသုံးတတ်ရင် ဘယ်နားကဟာကို ဘယ်လို click ပေးပြီး ဘာကို ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ စသုံးတဲ့သူဆို တော်တော်လေးကို စဉ်းစားရကျပ်ပါတယ်။ CD/DVD ခွေတွေဆိုတာ တွင်းထဲက နှိုက်ထုတ်လို့ ရတာ မဟုတ်တော့ စမ်းရိုက်ကြည့်လို့ ကောင်းတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် Professional လုပ်စားသူ မဟုတ်သူတွေ အတွက် သုံးမယ်ဆိုရင် Nero အစား တစ်ခြား အပေ့ါစား သုံးလို့ ကောင်းတဲ့ Burner လေးတွေ များစွာ ကျန်ပါသေးတယ်။ အပေါ့စားဆိုပြီး အထင်မသေးပါနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က Nero ထက် မနိမ့်ပါဘူး - မှန်ရာကို ပြောရရင် ကျွန်တော် အရင်က Nero သုံးပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Nero သုံးကို မသုံးဖြစ်တော့ပါဘူး - ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ သူ့ထက် သုံးရလွယ်ပြီး Hard disk drive မှာလည်း နေရာသိပ်မယူတဲ့ အပေါ့စား Software လေးတွေ အင်တာနက်ထဲမှာ မနည်းမနော ရှိနေလို့ပါ။ သူတို့ အားလုံးကို အခု တစ်နေရာတည်းကနေ တစ်ခုတစ်စည်းထဲ ပေါင်းထားပေးလိုက်ပါတယ်။5in 1 ပါ။
IsoBuster v2.7 + Serial's SETUP
MagicISO Maker 5.5 + Serial
UltraISO Premium Edition V9.3.6.2750 + License (Full Version)
2010 2011 MF Collection - Burner.rar (20.2 MB)
22. Ashampoo Burning Studio 10.10.0.1 +Key (32-64bit)
Nero ကိုလည်းဖော်ပြပြီးပြီ တစ်ခြား Burner တွေလည်း ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီ - ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ် - သူက Ashampoo ပါ - Data တွေပဲ ရိုက်ရိုက် - ISO ခွေပဲ ရိုက်ရိုက် - Windows ခွေတွေပဲ ကော်ပီ ကူးကူး - DVD တွေပဲ Create လုပ်လုပ် တစ်ခုတည်းနဲ့ သုံးလို့ ကောင်းတာ Ashampoo ပါပဲ - တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်း မတူလို့ အကောင်းဆုံးပါလို့ ကျွန်တော် မဆိုလိုပါဘူး - တကယ်လို့ Burner ဆို Nero သုံးရင် ကောင်းမလားဆိုပြီး စဉ်းစားမိရင် Nero ကို မသုံးပဲ ဒီ Ashampoo ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ တစ်ခါမှ အခွေကောင်းကောင်း မရိုက်ဖူးတဲ့ သူတောင် သူပြထားတဲ့ Menu ကို မြင်တာနဲ့ ဘာလိုချင်ရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လောက်အောင် အသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။
Ashampoo Burning Studio 10.10.0.1 +Key (32-64bit)
2010 2011 MF Collection - Shampoo.rar (75.2 MB)
Alcohol.120.v2.0.0.1331 ဆိုတာလည်း CD နဲ့ DVD burning software တစ်မျိုးပါပဲ - ဒါတင်မက ကိုယ်အမြဲသုံးနေကျ DVDs နဲ့ CDs တွေကိုလည်း စက်ထဲမှာ Backup လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြား functions တွေလည်း အများကြီးပါ။
2010 2011 MF Collection - Alco 120.rar (10.9 MB)
24. Norton Ghost
PC backup နဲ့ restore software တွေထဲမှာ Norton Ghost ကို လူသိများပါတယ်။ သူ့ကိုသုံးပြီး Hard Drive တစ်ခုလုံးကို Back up လုပ်လို့ ရသလို မိမိအတွက် အရေးကြီးရာ ကြီးရာ Partitions တွေအလိုက်ပဲ သီးသန့် Backup လုပ်လို့လည်း ရပါတယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်ရင်လည်း files တွေ folders တွေ အလိုက် Back up လုပ်ချင်လည်း ရပါတယ်။ တစ်ခြား features တွေလည်း အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခု အကြံပေးချင်တာ backup နဲ့ restore အတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပြီး သုံးချင်တာမျိုး ဆိုရင် Norton ကို သုံးမယ့်အစား Acronis True Image ကို ပိုပြီး သုံးစေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို အသုံးမပြုဖူးသေးသူ ( သို့မဟုတ် ) ကွန်ပြူတာနဲ့ သိပ်အကျွမ်းမဝင်သေးသူ တစ်ယောက်အတွက် features များတဲ့ Applications ကို အသုံးပြုတာဟာ ရန်ကုန်မြို့ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ သူတစ်ယောက် ဘတ်စ်ကားတိုးစီးဖို့ ကြိုးစားနေတာနဲ့ ဆင်တူပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်တော့မှ လိုရင်းကို လွယ်လွယ်နဲ့ ရောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး - ဒီအချိန်မှာ Taxi ဌားစီးလိုက်ပါ။ Acronis True Image က Taxi လိုပါပဲ။ ပါးစပ်က ဘယ်သွားမယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ Taxi က သွားချင်တဲ့ နေရာကို လိုက်ပို့ပေးနိုင်သလို - Acronis True Image ကလည်း စပြီး စမ်းသုံးကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ အလွယ်တကူ နားလည်စေနိုင်ပါတယ်။
2010 2011 MF Collection - NGhost.part1.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - NGhost.part2.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - NGhost.part3.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - NGhost.part4.rar (95.4 MB)
2010 2011 MF Collection - NGhost.part5.rar (22 MB)
25. Recovery Software Collections
ကွန်ပြူတာနဲ့ ထိတွေ့နေသူတိုင်း အမြဲလိုလို ရင်ဆိုင်ရတာ မိမိတန်ဖိုးထားတဲ့ Data တွေ ထင်မှတ်မထားပဲ ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ - ဖျက်ဆီးလိုက်မိတဲ့ ပြဿနာပါ - Backup Plan အမြဲ ထားရှိသူ တစ်ယောက်အတွက် ဘယ်ဖိုင်တွေ ဘယ်လိုပျက်ပျက် ရင်ခုန်လောက်စရာ အကြောင်းမရှိပေမယ့် ကွန်ပြူတာကို Backup Plan နဲ့ အသုံးမပြုသူ တစ်ယောက်အတွက်တော့ မိမိအတွက် အရေးကြီးတဲ့ Files တွေ ဖျက်ဆီးခံရတယ် - ဒါမှမဟုတ် ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာ သွေးပျက်လောက်စရာ ပြဿနာရပ်ပါပဲ - Recovery ဆိုတဲ့နည်းပညာဟာ ခုလိုပြဿနာမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့နေရသူ Users တိုင်းအတွက် ပျောက်ဆုံး ပျက်ဆီးသွားတဲ့ Files တွေ Folders တွေကို ယခင်အခြေအနေအတိုင်း ပြန်လည် ခေါ်ယူပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ Recovery လုပ်ဖို့အတွက် ဘာလိုပါသလဲ - Recovery software လိုပါတယ်။ Software ရှိယုံနဲ့ Recovery လုပ်လို့ မရသေးပါဘူး - လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလေးတွေ နည်းနည်းပါးပါး သိဖို့လိုပါသေးတယ်။ ဒီအကြောင်းကို နောက်ပိုင်းမှာ အကျယ်ချဲ့ပြီး ပြန်ရေးပေးပါဦးမယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ရှိထားဖို့လိုအပ်တဲ့ Recovery software တွေကို လက်ထဲမှာ ရှိနေနိုင်အောင် တစ်ခုတစ်စည်းထဲ4in 1 ပေါင်းစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Easy Recovery Prof. v6.10
2010 2011 MF Collection - Recovery.rar (80.1 MB)
အောက်ပါအသင်းဝင် 27 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ပုထုဇဉ်, မိုးကျော်ခမ်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, နိုးတူး, aungzawoopde, bonge, hellboy, kyaukphyu, minthumon, mr.kohtun, pho the, phoetharlay, PoeHapGyi, sawjonnie, sawlinux, thetnaung87, tu tu, yumaung
26. TuneUp Utilities 2010 9.0.4600.3 + Serials -[HB]
Windows 7, Vista, XP တွေ အတွက် optimization software တွေ ထဲမှာ TuneUp Utilities ကိုတော့ ကျွန်တော် သဘောအကျဆုံးပါပဲ - သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အရင် 2009 ကထက် တော်တော်လေး သာပြီး ကောင်းလာသလို သုံးရတာ လည်း ပိုပြီး အဆင်ပြေလာတာ ကျွန်တော် သတိထားမိပါတယ်။ ပထမဆုံး စသုံးတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Configuration ရအောင် Internet ပိုင်း - Hardware & Software ပိုင်း - Visual effects ပိုင်း ချိန်ညှိရတာလေးတော့ ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ နှစ်မျိုး တင်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ခုက Serials နဲ့ပါ - နောက်တစ်ခုက Keymaker နဲ့ပါ။ အကယ်၍ Serials အလုပ်မလုပ်တော့ရင် နောက်တစ်မျိုး ပြောင်းသုံးပါ -
TuneUp Utilities 2010 v9.0.4600.4 Incl. Keymaker-CORE.rar 18.906 MB
TuneUp Utilities 2010 9.0.4600.3 + Serials -[HB].rar 18.714 MB
2.Add Serial Key
3.Enjoy it !
27. Nitro PDF Professional
Nitro PDF Professional ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကျ Adobe® Acrobat® အစား ပြောင်းလဲ အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Software တစ်မျိုးပါ။ သူ့ကို သုံးပြီး PDF files တွေကို create လုပ်လို့ ရမယ်။ နောက် convert, edit, combine, secure, annotate, form-fill, အားလုံး လုပ်ဆောင်လို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ PDF files တွေရဲ့ သဘောတရားနဲ့ ခုလို PDF software တွေ မရှိပဲ convert, edit, combine, secure, annotate, form-fill, ဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် Pdf အကြောင်း သိကောင်းစရာ ဆိုပြီး ဖော်ပြခဲ့ပြီးသားလည်း ရှိပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
PDF EDITING SOFTWARE - Nitro PDF Professional 6.1.2.1 x86x64 + KEYGEN
2010 2011 MF Collection - Nitro.rar (81.6 MB)
28. Nero 7.10.1.0 + Serial
ကျွန်တော် Nero Multimedia Suite 10.0.13100 + key crack TESTED ဆိုတာကို အပေါ်မှာ တင်ထားခဲ့ပေးပြီးပါပြီ။ ဒီ Nero 7.10.1.0 + Serial ဆိုတာကို ထပ်တင်ပေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းက Nero နဲ့မှ အခွေရိုက်တတ်သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေအောင် ထပ်ဖြည့်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အရင် Nero7တော်တော်များများက Windows7နဲ့ Compatible မဖြစ်လို့ install လုပ်မရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီ Nero 7.10.1.0 + Serial ကတော့ Windows7နဲ့လည်း Compatible ဖြစ်ပါတယ်။ Nero ကို Burning ROM ပဲ လိုအပ်သူတွေအတွက်တော့ ဒီကောင်လေးက Versions နိမ့်ပေမယ့် သုံးရတာ အဆင်ပြေလို့ Nero Multimedia Suite ကြီး သုံးမယ့် အစား ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။
Nero 7.10.1.0 + Serial
2010 2011 MF Collection - Nro7Comp W7.part1.rar (90.6 MB)
2010 2011 MF Collection - Nro7Comp W7.part2.rar (83.1 MB)
29. Revo Uninstaller Pro v2.2.3
သုံးဖူးသူတိုင်း သဘောကျတဲ့ Revo Uninstaller ဟာ installer ပေါင်းများစွာကြားက ခွဲထွက်လာပြီး Safe အဖြစ်ဆုံးနဲ့ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ မလိုချင်တော့တဲ့ Applications တွေအားလုံးကို ဖျက်ထုတ်တဲ့ နေရာမှာ အကြွင်းအကျန်အားလုံး မကျန်ရအောင် အသန့်စင်နိုင်ဆုံး Software တစ်ခုလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ တစ်ခြား Uninstaller တွေနဲ့ မတူတာက အသုံးပြုပုံ ရိုးရှင်းပြီး Registery ကို Clean တဲ့ နေရာမှာ Safe ဖြစ်တာပါ။ Revo Uninstaller မှာ Free နဲ့ Professional ဆိုပြီး ( ၂ ) မျိုး ( ၂ ) စားရှိပြီး ခု ကျွန်တော် တင်ပေးထားတာကတော့ Pro version ဖြစ်ပါတယ်။ Revo uninstaller free version ကို ဒီနေရာမှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
2010 2011 MF Collection - Revo Pro 2.2.3.rar (8.8 MB)
30. RSS Readers
အင်တာနက်ထဲမှာ Blog တွေ ဖတ်တယ် - Websites တွေ လိုက်ဖတ်တယ် - ဆိုဒ် တစ်ခု နှစ်ခုလောက်ပဲ ဖတ်ရင် အကြောင်း မဟုတ်ပေမယ့် ဖတ်တဲ့ ဆိုဒ်တွေ များရင်များလာသလောက် ရာချီလာပြီ ဆိုရင် တစ်နေ့ နဲ့ တစ်နေ့ URL အားလုံး စုံအောင် Browser ရဲ့ Address bar ထဲ ရိုက်ထည့်ပြီး ဖတ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ တကယ်ကို မလွယ်ပါဘူး - ဒါကို အင်တာနက်ထဲမှာ တကယ်စာဖတ်သူတိုင်း ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခက်အခဲကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဆိုတာ ဆိုဒ်အားလုံးက တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အသစ်တက်သမျှ အကြောင်းအရာတိုင်းကို ဆိုဒ်အားလုံးကို လည်ပတ်ဖတ်ရှုစရာ မလိုပဲနဲ့ တစ်နေရာတည်းက ထိုင်ဖတ်လို့ ရအောင် စီစဉ်ပေးနိုင်တဲ့ Software မျိုး ကျွန်တော်တို့ စက်ထဲမှာ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ RSS readers တွေက အင်တာနက်ထဲမှာ ပလူပျံလောက်အောင် Free ရတာပါ။ အားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံးကတော့ စက်ထဲမှာ ဘာ software install လုပ်စရာမလိုပဲ Account တစ်ခုရှိယုံနဲ့ စတင် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Google Reader ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ချို့ စာဖတ်သူတွေကတော့ Browser မသုံးပဲ စက်ထဲကို install လုပ်ပြီးမှ သုံးရတာကို ကျင့်သား ရနေတဲ့ အတွက် သူတို့တွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင် တစ်ခြား အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး စာဖတ်ဖို့လည်း အဆင်ပြေတဲ့ RSS readers ကောင်းတွေပါကို ပူးတွဲ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ Link ကနေ Download ချဖို့ အဆင်မပြေသူများ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ မူရင်း websites တွေကနေ တိုက်ရိုက် Download ချနိုင်အောင်လည်း Links တွေ အောက်မှာ ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
2010 2011 MF Collection - RSS.rar (14.6 MB)
နောက်ဆုံး တစ်ပိုင်း ဆက်ရန် -
Last edited by KznT; 27-09-2010 at 03:30 PM..
$ညိုမင်းလွင်$, ဂတုံးလေး, ညအိက, ညီခဝေ, ပုထုဇဉ်, မိုးကျော်ခမ်း, လူမုန်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မြင့်မိုရ်, နိုးတူး, amaung344, bonge, hellboy, kyaukphyu, minthumon, Oliveway, phoetharlay, sawjonnie, tu tu, zo
Arker Min Myat
ပို့စ် 27 ခုအတွက် 52 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အချိန်ယူပြီး ဒေါင်း ပြီးသွားပေမဲ့ ပြန်ဖြေတဲ့ အခါမှာ အမှတ် (၈) နဲ့ (၁၅) ကို ဖြေလို့မရဘူးဖြစ်နေလို့
Arker Min Myat ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Arker Min Myat
ပို့စ် 261 ခုအတွက် 1,643 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုအာကာ ဖြည်လို့ ၇ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တောင်အကုန်ဖြည်ထားပြီးပြီ။ megaupload နဲ့ ဒေါင်းထားတာ ၇တယ်။ ပုံလေးနဲ့ ပြပါလား part 1 တစ်ခုကိုဘဲ Extract Here ဆိုတဲ့ ကို နှိပ်လိုက်။ကျန်တာ အလိုလိုဖြည်သွားလ်ိမ့် မယ့် ။
Last edited by ဝင်းအောင်; 11-07-2010 at 05:41 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ဝင်းအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းမောင်, hellboy, KznT, minthumon, mr.kohtun, phoetharlay
Find More Posts by ဝင်းအောင်
11-07-2010, 05:54 PM
Originally Posted by Arker Min Myat
အကို တို့ရေ အချိန်ယူပြီး ဒေါင်း ပြီးသွားပေမဲ့ ပြန်ဖြေတဲ့ အခါမှာ အမှတ် (၈) နဲ့ (၁၅) ကို ဖြေလို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ ပြန်စစ်ပေးပါအုံး ဘယ်လိုပြန်ဖြေရတာ ရှင်းပြပေးပါအုံး
ကို အာကာမင်းမြတ် ဒေါင်းထားတဲ့ ( ၁၅ ) ပိုင်းလုံးကို Download ချထားပြီးပြီးချင်း အခြေအနေ - Filename အပြည့်အစုံနဲ့ မြင်သာအောင် Screenshot လုပ်ပြီး တစ်ချက်လောက်ပြပေးပါ - အဲ့ဒီ့ကနေ Error တစ်ချက်လောက် စစ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Extract လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ တက်တဲ့ Error ကို ထပ်ပြီး Screenshot လုပ်ပြီး တင်ပေးပါ။ အဲကနေလည်း ကြည့်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ( ၂ ) ပုံ တင်ပေးပါ။ အရင်ဆုံးတော့ ဘာမှ မလုပ်ကြည့်သေးခင် စက်ထဲက WinRAR version ကို အရင်စစ်ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် အပေါ်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ WinRAR version ထက် နိမ့်နေတယ်ဆိုရင် စက်ထဲက WinRAR ကို uninstall လုပ်ပြီး ဖြည်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ခုက ဖြည်တဲ့နေရာမှာ Password တောင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ password ကို www.myanmarfamily.org လို့ ထည့်တဲ့ အချိန်မှာ copy > paste မလုပ်ပဲ keyboard ကနေ English layout ဖြစ်မဖြစ် သေသေချာချာ စစ်ပြီးမှာ စာလုံးတစ်လုံးချင်းစီကို ဖြည်းဖြည်းချင်းရိုက်ပြီး Ok ပေးကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ အဲတာမှ အဆင်မပြေပြန်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဘာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ Screenshot ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ပြန်စဉ်းစား ကြည့်ပါ့မယ်။
Last edited by KznT; 11-07-2010 at 05:57 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, ပုထုဇဉ်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, aungzawoopde, bonge, minthumon, openeyes, phoetharlay, sawjonnie, zo
31. Total Commander 7.55 Final + Key
Total Commander ဆိုတာ Windows မှာသုံးတဲ့ File manager လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး သူ့ကို အသုံးပြုခြင်း အားဖြင့် Windows Explorer မှာ စီမံခန့်ခွဲဖို့ ခက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Total Commander နဲ့ အလွယ်တကူ စီမံ ခန့်ခွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Total Commander နဲ့ အသုံးပြုပုံကို ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ အကျယ်ရေးသား ခဲ့ပြီး ဖြစ်လို့ အသစ်ထပ်ပြီး မဖော်ပြလိုက်တော့ပါဘူး။
Total Commander 7.55 Final + Key
2010 2011 MF Collection - Tcommand.rar (3.1 MB)
32. Google_Earth pro_5.0.1337
Google Earth ဆိုတာ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးကို ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ virtual globe တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးပြီး ကမ္ဘာ့နေရာ ဒေသ အသီးသီးက နိုင်ငံအသီးသီး မြို့အသီးသီးရဲ့ တည်နေရာ အနေအထားတွေ - လမ်းတွေ - အိမ်တွေ - - geographic information တွေကို program အဖြစ်ရေးဆွဲ ထည့်သွင်းထားတဲ့ 3D EarthViewer တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်ရေမြေရဲ့ ဝေဟင်ကနေ မြင်ရမယ့် မြေပြင်အနေအထားကို လေ့လာနိုင်ပြီး - ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာဒေသ တစ်ခုက မြေမျက်နှာပြင် အနေအထား တည်နေရာနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ပုံပန်းသွင်ပြင် စတာတွေကိုလည်း စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
2010 2011 MF Collection - Gearth.rar (10.4 MB)
33. System Tuning
Windows ဆိုတာ ဘယ်လောက်ကြီး ကောင်းပါတယ်ဆိုဆို အသုံးပြုလာတာ ကြာတာနဲ့ အမျှ အနည်းနဲ့ အများ Errors လေးတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။ ဒီ ပြဿနာကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းထားနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ရေး Software တွေ အင်တာနက်ထဲမှာ Freeware ရော Shareware ရော ဆိုပြီး မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် အများအပြားရှိပေမယ့် အားလုံးထဲမှာ စိတ်ကျေနပ်လောက်စရာ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အသုံးပြုလို့ ကောင်းတာ အောက်ဖော်ပြပါ Software ( ၄ ) မျိုးပါ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ Software တော်တော်များများကို စက် ( ၃ ) ခါ ဆိုင်ပို့ခံပြီး စမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ တော်တော်လည်း မွဲခဲ့ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ သူတို့ ( ၄ ) ခုနဲ့တင် ကျေနပ်လိုက်ပါပြီ။ လုံလောက်ပါတယ်။ စိတ်ချရပါတယ်။ ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ကောင်းပါတယ်။
အဲဒီ့ Software ( ၄ ) မျိုးကတော့ -
ccsetup233 - တိုက်ရိုက် Download ရယူနိုင်မည့် Link အားချိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။
dfsetup120 - တိုက်ရိုက် Download ရယူနိုင်မည့် Link အားချိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။
Recuva - Recuva ဆိုတာ Windows utility တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်စက်ထဲက မတော်တဆ မှားယွင်းဖျက်ထုတ်မိလိုက်တဲ့ files - ဓာတ်ပုံ - documents တွေကို အလွယ်တကူ ပြန်လည်ရယူပေးနိုင်တဲ့ Software တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
TuneUp Utilities 2010 9.0.4400.16 Software + Serial Keys - သူ့ကိုတော့ အမှတ်စဉ် ( ၂၆ ) မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
2010 2011 MF Collection - System.rar (10.6 MB)
မိမိစက်ရဲ့ လုံခြုံရေး အတွက် ဘာ Antivirus များ သုံးကြပါသလဲ - ကျွန်တော်ကတော့ Kaspersky သမားပါ။ အရင် Kaspersky မတိုင်ခင် သုံးခဲ့တာ NOD32 - Norton - Bitdefender - Avast နဲ့ Macfee ပါ။ ခုတော့ အားလုံး တစ်ခုမှ မသုံးတော့ပဲ Microsoft Security Essentials ကို သုံးနေပါတယ်။ Microsoft Security Essentials ကို ဘာကြောင့်သုံးသလဲ - ဟုတ်ကဲ့ အလုပ်ရှုပ် သက်သာပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းလို့ပါ။ Antivirus တွေရဲ့ Quality ကို တကယ်ကောင်းမကောင်း အမှန်တကယ် စိတ်ချရမရ ခင်ဗျား ဘယ်လို ဆန်းစစ်သလဲ - ကျွန်တော်တို့တွေ Antivirus တွေရဲ့ Quality ကို မျက်မြင်နဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုမှ ဆန်းစစ်လို့ မရပါဘူး - ကျွန်တော်တို့ အစား Antivirus တွေရဲ့ Quality ကို တကယ်ကောင်းမကောင်း အမှန်တကယ် စိတ်ချရမရ ( ၃ ) လတစ်ခါ ပုံမှန် စစ်ဆေးပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ အဖွဲ့အစည်း လိပ်စာကတော့ http://av-comparatives.org/ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒီ့ Results တွေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော့် လိုလားချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Antivirus ကို ရွေးသုံးပါတယ်။ May 2010 က စမ်းသပ်ထားတဲ့ Antivirus တွေရဲ့ အသေးစိတ် ဆန်းစစ်ချက်တွေနဲ့ သူတို့ ဘယ်လိုစစ်ဆေးတာလဲ ဆိုတာကို ဒီနေရာကနေ Download ချပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ နောက်ဆုံး နှိုင်းယှဉ်ချက် Result ကနေ ရရှိလာတဲ့ Advanced+ Products တွေကနေ ကျွန်တော့်စက်နဲ့ သင့်တော်မယ့် Product ကို ကျွန်တော် အသုံးပြုပါတယ်။
လတ်တလော အခြေအနေမှာ မြန်မာမိသားစုအတွက် Advanced+ Products တွေထဲက Products နှစ်မျိုးကို မိသားစုတွေ အသုံးချနိုင်အောင် ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
EAV 32 bit 4.2.40.0
ESS 32 bit 4.2.40.0
Kaspersky Antivirus and Internet Security 2011
EAV 32 bit 4.2.40.0.rar (36.9 MB)
ESS 32 bit 4.2.40.0.rar (40.9 MB)
2010 2011 MF Collection - KIS KAV.part1.rar (104.9 MB)
2010 2011 MF Collection - KIS KAV.part2.rar (98.6 MB)
ဒီ 2010 2011 Ultimate Software Guide for Windows Users ကို ကျွန်တော် ဖော်ပြဖြစ်တာ Windows တစ်ခုကို Installed လုပ်ဆောင်အပြီး သင့်တော်တဲ့ Software တွေကို မိသားစုဝင်တွေ အနေနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အကြံပေးချင်လို့ ရေးသားခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိပြီး Developers တွေအနေနဲ့ အချိန်ပေါင်းများစွာ ငွေပေါင်းများစွာ အကုန်ကျခံ ရင်းနှီးပြီးမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ Software တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်က အလကားသုံးနေယုံမက အများတကာကိုပါ အလကား အသုံးပြုနိုင်အောင် မျှဝေတာဟာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Users တွေကို ကူညီရာရောက်ပေမယ့် Developers တွေနဲ့ Software ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ စီးပွားရေးကို တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ထိခိုက်စော်ကားရာ ရောက်နေတာမို့ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမှန်တကယ် မတတ်နိုင်သူတွေက လွဲရင် စီးပွားရေး ပြေလည်သူတွေ အနေနဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ Applications တွေထဲက မိမိအမှန်တကယ် သဘောကျရာ Software တစ်ခုခုကို Crack files တွေနဲ့ မသုံးစွဲကြပဲ အမှန်တကယ် ဝယ်ယူသုံးစွဲကြခြင်း အားဖြင့် Developers နဲ့ Software ထုတ်လုပ်သူတွေကို ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
တကယ်လို့ မတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ ဆိုရင်လည်း Developers တွေ - Software ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ် ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ / ရင်းနှီးမှု တွေအတွက် ငွေကြေးအားဖြင့် မပံ့ပိုးနိုင်ရင်တောင် ကျန်းမာချမ်းသာ ကြစေဖို့ ဆုတောင်းမေတ္တာများ ပို့သပေးပြီး သုံးစွဲကြပါလို့ တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
Last edited by KznT; 13-07-2010 at 12:57 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 36 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုဦး, ချစ်သားငယ်လေး, ဂတုံးလေး, ပုထုဇဉ်, လူမုန်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, အေးမင်းမောင်, မြင့်မိုရ်, နိုးတူး, arkaraung, aungzawoopde, AZM, bonge, hellboy, Hlwamkoko, htoo war, Ko-Naing, kyaukphyu, maythumg, minthumon, poker, sawjonnie, soehtetpaing, tu tu, victor10, wunna313, yawnathan, zo
13-07-2010, 11:49 AM
ပို့စ် 30 ခုအတွက် 84 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
rar Password? Password? Password? Password?Password? Password? Password?Password? Password? Password?Password? Password? Password?Password? Password? Password?Password? Password? Password?Password? Password? Password?
Visit zaya007's homepage!
Find More Posts by zaya007
ပို့စ်ရဲ့ ဟိုးထိပ်ဆုံး အပေါ်ဆုံး ပို့စ် နံပါတ် ( ၁ ) မှာ စာလုံး အကြီးကြီးနဲ့ ဘောင်ခတ်ပြီး ပြူးနေအောင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ် bro
Last edited by KznT; 13-07-2010 at 11:51 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, arkaraung, minthumon, phoetharlay
13-07-2010, 12:18 PM
ဆော်ရီးဗျို့။ ကျန်တော်က ရှမ်းနည်းနည်းစပ်လို့ပါ။ ဟဲဟဲ
ွှံ THANKS alot for this forum.
i cant write myanmar font, please help how to write.
Find More Posts by mghtwe405
14-07-2010, 05:10 PM
Originally Posted by mghtwe405
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ $ညိုမင်းလွင်$ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bonge, ko myo, KznT, minthumon, phoetharlay
အစ်ကို ကျွန်တော်Microsoft Office 2010 Professional Plus x64 and x86 14.0.4743.1000 Full Activated
ကို run တာ အောက်က ပုံဘဲတွေ့ နေ၇ပြီး ၇ပ်နေတယ်။ ညီလေးလည်း ဆက်မလုပ်တတ်လို့ အစ်ကို ကုညီပါဦး။
15-07-2010, 12:17 AM
ကိုဝင်းအောင်က ဘယ် Windows system ကို သုံးပါသလဲ ပုံကြည့်ရတာ Vista ဖြစ်မလား7ဖြစ်မလား မသိဘူး - အလွယ်ကူ ဆုံးနည်းကတော့ တကယ်လို့ ကိုဝင်းအောင်က Windows XP သုံးတယ်ဆိုရင် Windows XP System သုံးတဲ့ တစ်ခြားသူ တစ်ယောက်ရဲ့ C:\_Windows\_Fonts စက်ထဲက fonts တွေကို ကော်ပီကူးပြီး အခု install လုပ်လို့ မရဖြစ်နေတဲ့ စက်ထဲက C:\_Windows\_Fonts ထဲထည့်လိုက်ပါ။ တကယ်လို့ vista သို့မဟုတ်7ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ - သက်ဆိုင်ရာ Vista -7သုံးတဲ့ စက်တစ်ခုရဲ့ C:\_Windows\_Fonts ထဲက fonts တွေကို ကော်ပီ ကူးပြီး install လုပ်လို့ မရဖြစ်နေတဲ့ စက်ထဲက C:\_Windows\_Fonts ထဲထည့်ပါ - ဒါ အမြန်ဆုံးနဲ့ ၁၀၀ % အလွယ်ဆုံးနည်းပါပဲ - စမ်းကြည့်ပါဦး အဆင်မပြေရင် ထပ်ပြောပေးပါ။
Last edited by KznT; 15-07-2010 at 12:47 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, မိုးတိန်, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, AZM, minthumon
15-07-2010, 12:31 AM
ကျွန်တော့် ဝင်းဒိုးက window7Ultimate ပါ။ font ထဲဝင်ကြည့် တော့ လဲ တော်တော်များများ၇ှိသေးတယ်အစ်ကို ။ အစ်ကိုပြောသလိုဆို ကျွန်တော် လက်ကျန် ဖောင့် တွေပါဖျက်ပြီး အသစ်run ၇င် ၇မလားအစ်ကို ။
15-07-2010, 12:44 AM
ကျွန်တော်ပြောတာက အရင် fonts တွေကို ဖျက်ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး - တစ်ခြားစက်ကနေ Copy ကူးပြီး ကိုယ့်စက်ထဲမှာ Overwrite လုပ်ခိုင်းတာပါ။ ထားပါ - ခုနောက်တစ်နည်း ပြောကြည့်ပါ့မယ်။ ဒီအောက်နည်းနဲ့ အဆင်မပြေမှ အပေါ်နည်းကို ပြန်စမ်းကြည့်ပါ။
Microsoft ကနေ " Error 1907. Could not register font. Verify that you have sufficient permissions to install fonts, and that the system supports this font " အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ Update fix ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ Update က Office 2010 install လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ တက်တဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ Error အတွက် ပြေလည် စေပါလိမ့်မယ်။ Update က Windows Vista Service Pack 1 and 2, Windows Server 2008, and Windows Server 2008 Service Pack2အတွက်ပါ။ ဒါပေမယ့် Windows7Ultimate အတွက် ဆိုရင်လည်း Windows Vista Update fix နဲ့သာ သုံးလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ့ Update fix ထဲမှာ fonts အမျိုးအစား မျိုးစုံရဲ့ newer versions တွေပါပြီး Office 2010 installation လုပ်ဆောင်တဲ့ အချိန်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ Error 1907 ကို ပြေလည် စေနိုင်ပါတယ် ကိုဝင်းအောင် - စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး -
Update fix ကို ဒီအောက်ကနေ သွားပြီး Download ချလိုက်ပါ။ Operating system ကိုတော့ သတိထားပြီး ရွေးချယ်ပါ။ x86-based နဲ့ x64-based မမှားပါစေနဲ့။
KB Article: 980248
Last edited by KznT; 15-07-2010 at 12:46 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, မိုးတိန်, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, AZM, bonge, minthumon
15-07-2010, 01:07 AM
ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီ့ link ကို ပေးသာပေးလိုက်ရတာ ကိုဝင်းအောင် ပြဿနာ တက်နေမလား မသိဘူး - အဲဒီ့ Update fix မျိုးတွေက Microsoft ကနေ Free ပေးတာ မှန်ပေမယ့်လို့ သူ free ပေးထားတဲ့ Update fix ကို Download လိုချင်တယ် ဆိုရင် genuine Microsoft Windows ကို သုံးတဲ့သူ ဖြစ်မှ သူက Download လုပ်ခွင့် ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကို ဝင်းအောင် အဲ့ဒီ့ Update fix ကို Download ချမယ် ဆိုရင် ကြားထဲမှာ အဆင့် ( ၂ ) ဆင့် လောက် လုပ်ဖို့ လိုပါသေးတယ်။ လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်က နဲနဲ ရှုပ်တီး ရှုပ်ရှက်နိုင်ပါတယ်။ အဲတာတွေတော့ အသေးစိတ် မပြောတော့ပါဘူး - မျက်စိရှုပ်နားရှုပ်ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ ကျွန်တော့် စက်ကနေပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် genuine Microsoft Windows ဖြစ်ကြောင်း Activation လုပ်ပြီး Download ချ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအောက်ကနေ Update fix ကို အပူအပင်ကင်းစွာ နဲ့ ယူလိုက်ပါ။
Important !! Install လုပ်ပြီးရင် Restart ပေးပါ။
ဒါက x86 version အတွက် Error 1907 Update fix ပါ။
ဒါက x64 version အတွက် Error 1907 Update fix ပါ။
Last edited by KznT; 15-07-2010 at 01:10 AM..
$ညိုမင်းလွင်$, ဂတုံးလေး, လူမုန်း, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, bonge, minthumon
15-07-2010, 01:23 AM
အစ်ကို ၇သွားပြီ.။င်္ညီလည်း အစက Microsoft 2010 run လိုက်တိုင်း အဲနားေ၇ာက်တော့ ၇ပ်၇ပ်နေတာ။တတ်လာတဲ့box ထဲက Igore ဆိုတာကို ၄ကြိမ်မြောက် click လိုက်တာ ( ပထမ လုပ်တာ ချက်ချင်းဘဲပြန်တတ်လာတယ်။ ဒုတိယနဲ့ တတိယကျတော့ နည်းနည်းကြာတယ် ။ဒါပေမယ့် ဒီ boxဘဲ ပြန်တတ်လာတယ်။ ၄ ကြိမ်မြောက်ကျမှဘဲ ပြန်တတ်မလာဘဲ အလိုလို လုပ်သွားတာ)၇သွားတယ်။ အစ်ကိုဟာကိုညီမှတ်ထားပါမယ်။နောက်တခေါက် ဒီလိုဖြစ်လို၇ှိ၇င် လုပ်ပါ့ မယ်အစ်ကို ။
အ၇င်က Microsoft Office 2010 (အစ်ကိုအ၇င်ကတင်ထားတဲ့ ဟာကို) run ထားတာ။ဒီကောင်တုန်းကျတော့ အစ်ကိုပြောတဲ့ Microsoft Office 2010 ProfessionalPlus ကိုနှိပ်လိုက်၇င် ဆော့ ဝဲတခု လိုတယ်ဆိုပြီး box တခုတတ်လာပြီးဆက်မလုပ်တော့ ဘူး။ ဒါနဲ့ကိုဆန်းမောင်
က အဲဒါက အကုန်မrun ဘဲ လိုချင်တာတခုက်ိုဘဲ run ၇င် ၇တယ်ဆိုလို့ညီလည်း Microsoft Word 2010 တခုဘဲ Run ထားတာ အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမယ့် အခု ကျတော့ ညီက Outlookလေးသုံးချင်လို့ အစ်ကို အသစ်တင်ပေးထားတဲ့Microsoft Office 2010 သုံးတာပါအစ်ကို ။ ဆိုလိုချင်တာက အစ်ကို ဟာနှစ်ခုစလုံး ညီ လုပ်ကြည့် တာကိုပါ ။ အဆင်ပြေပါတယ်အစ်ကို နှစ်ခုစလုံး။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အစ်ကို ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဝင်းအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
15-07-2010, 01:53 AM
ဟူတ်တယ်အစ်ကိုေ၇ ... ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီိလင့် တခုနဲ့ထပ်ဒုက္ခတွေ့ နေတယ်။ ခက်တာက အစ်ကို ပြောတဲ့x64 နဲ့ x86 ကို ကျွန်တော်သိပ်မ၇ှင်းဘူး ။ အစ်ကိုပေးတဲ့ Microsoft Office 2010 ကိုဒေါင်းလိုက်တာ ဖိုင်နှစ်ခု ၇တယ် ။ x64 နဲ့ x86 ။ အဲဒါနှစ်ခုလုံးကို ညီက rar ဖိုင်ကနေဖြည်လိုက်တာ ISO ဖိုင်၂ခု၇လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ညီက တခုကိုဖြည်တယ်။ အဲဒီတခုကိုဖြည်လိုက်ပြီ( x64ဆိုပါတော့ ) ။ပြီးတော့၇လာတဲ့Set Up ဖိုင်ကို runလိုက်တာ BOXတခုတက်လာတယ် ။ မ၇သေးဘူးဆိုတဲ့ သဘော။ (ညီ ..နားလည်တာကိုပြောတာပါ)
ဒါနဲ့ င်္ညီလည်းမထူးပါဘူးဆိုပြီး ကျန်တဲ့ ISO ဖိုင် ကိုထပ်ဖြည်တယ်. . ။ ပြီးတော့ Yes to all ဆိုပြှီးပေးလိုက်တယ်။ အဲတော့ မှ ၇လာတဲ့Set Up ဖိုင်ကို runလိုက်တာ BOX မတတ်လာတော့ဘူး...။(မှတ်ချတ်။ ။အပေါ်က အဆင့် ကိုမေ၇ာက်သေးပါ) ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အစ်ိကိုပြောတဲ့ လင့် နေ၇ာလဲေ၇ာက်ေ၇ာ X64 ဘဲယူ၇င်ကောင်းမလား ။ X86 ဘဲယူ၇င်ကောင်းမလားဆိုပြီးဒုက္ခတွေ့ နေတယ်။ ကျွန်တော်က နှစ်ခုစလုံးပေါင်း run ထားသလိုဖြစ်နေလို့။ အစ်ကို အသစ်ေ၇ာက်လာတဲ့ပို့ စ်တောင် မသိလိုက်ဘူး။ နောက်မှ အစ်ကိုပြန်၇ှင်းအောင်လုပ်ပေးထားမှန်းသိတာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသွားပါပြီ အစ်ကို..။အခုလို မနားတမ်းဖြေကြားပေးတဲ့ အတွက် အစ်ကို တခုခုတောင်ကျွေးချင်ပါတယ် ။ ကျေးဇူးတင်တာတောင်အားနားလှပါပြီးအစ်ကို။ တကယ်ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဝင်းအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
15-07-2010, 03:35 AM
အခု ကျတော့ ညီက Outlook လေးသုံးချင်လို့ အစ်ကို အသစ်တင်ပေးထားတဲ့Microsoft Office 2010 သုံးတာပါအစ်ကို ။ ဆိုလိုချင်တာက အစ်ကို ဟာနှစ်ခုစလုံး ညီ လုပ်ကြည့် တာကိုပါ ။ အဆင်ပြေပါတယ်အစ်ကို နှစ်ခုစလုံး။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အစ်ကို ။
အဆင်ပြေသွားတော့ ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ - အဆင်မပြေရင် ကျွန်တော်လည်း နေမထိ ထိုင်မသာနဲ့ - ခုတော့
ခက်တာက အစ်ကို ပြောတဲ့x64 နဲ့ x86 ကို ကျွန်တော်သိပ်မ၇ှင်းဘူး ။ အစ်ကိုပေးတဲ့ Microsoft Office 2010 ကိုဒေါင်းလိုက်တာ ဖိုင်နှစ်ခု ၇တယ် ။ x64 နဲ့ x86 ။ အဲဒါနှစ်ခုလုံးကို ညီက rar ဖိုင်ကနေဖြည်လိုက်တာ ISO ဖိုင်၂ခု၇လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ညီက တခုကိုဖြည်တယ်။ အဲဒီတခုကိုဖြည်လိုက်ပြီ( x64ဆိုပါတော့ ) ။ပြီးတော့၇လာတဲ့Set Up ဖိုင်ကို runလိုက်တာ BOXတခုတက်လာတယ် ။ မ၇သေးဘူးဆိုတဲ့ သဘော။
x64 ကို Setup လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ မရတာ ကိုဝင်းအောင် စက်က x86 based ဖြစ်နေလို့ နေပါလိမ့်မယ်။ x64 နဲ့ x86 ဆိုတာကလည်း လက်တွေ့နယ်ပယ်က ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေအရသာ ပိုပြီး ပြည့်စုံသထက် ပြည့်စုံအောင် x64 ကို ထည့်ထည့် ပြောနေရတာပါ - တော်တော်များများကတော့ ခုချိန်ထိ x86 based ကိုပဲ သုံးနေကြသေးတာ ကျွန်တော်လည်း သတိထားမိပါတယ်။
ဒါနဲ့ င်္ညီလည်းမထူးပါဘူးဆိုပြီး ကျန်တဲ့ ISO ဖိုင် ကိုထပ်ဖြည်တယ်. . ။ ပြီးတော့ Yes to all ဆိုပြှီးပေးလိုက်တယ်။ အဲတော့ မှ ၇လာတဲ့Set Up ဖိုင်ကို runလိုက်တာ BOX မတတ်လာတော့ဘူး...။(မှတ်ချတ်။ ။အပေါ်က အဆင့် ကိုမေ၇ာက်သေးပါ)
ဒီ ISO ဖိုင်ကို ဖြည်ပြီး Setup ကို Run တဲ့ အချိန်မှာကျတော့ ရသွားတယ် ဆိုတာ ကိုဝင်းအောင်စက်က x86 based ဖြစ်တာ သေချာနေလို့ ရသွားတာပါ။ Software ထုတ်လုပ်သူတွေက Windows အသီးသီးမှာမှ x64 based OS အတွက်ရော x86 based OS အတွက်ရော သုံးလို့ ရအောင် Software ကို နှစ်မျိုးနှစ်စား ထုတ်ပါတယ်။ အဲမှာ ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်စက်ဟာ ဘယ် System type ကိုသုံးထားလဲ ဆိုတာ သိဖို့ လိုပြီး ကိုယ့် System type နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Software ကို ရွေးသုံးရတာမျိုးပါ။ ကျွန်တော့် အထင် ကိုဝင်းအောင် - ကျွန်တော်ရေးထားခဲ့ဖူးတဲ့ 64 bit နှင့် 32 bit OS များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို မဖတ်ဖြစ်သေးဘူးနဲ့ ထင်ပါတယ်။ အားရင်တော့ အဲတာလေး တစ်ချက်လောက် ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဒါဆို 64 bit နှင့် 32 bit OS တွေအကြောင်းကို အနည်းအကျဉ်း နားလည် သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အစ်ိကိုပြောတဲ့ လင့် နေ၇ာလဲေ၇ာက်ေ၇ာ X64 ဘဲယူ၇င်ကောင်းမလား ။X86 ဘဲယူ၇င်ကောင်းမလားဆိုပြီးဒုက္ခတွေ့ နေတယ်။ ကျွန်တော်က နှစ်ခုစလုံးပေါင်း run ထားသလိုဖြစ်နေလို့ ။
X64 ဘဲယူရင်ကောင်းမလား။ X86 ဘဲယူရင်ကောင်းမလားဆိုပြီး တော့, တော့ ဒုက္ခ မဖြစ်ပါနဲ့ ကိုဝင်းအောင်ရေ အပေါ်က ပေးထားတဲ့ Link ကိုသာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ လည်သွားပါလိမ့်မယ်။ ( နား )
အစ်ကို အသစ်ေ၇ာက်လာတဲ့ပို့ စ်တောင် မသိလိုက်ဘူး။ နောက်မှ အစ်ကိုပြန်၇ှင်းအောင်လုပ်ပေးထားမှန်းသိတာပါ။
ဟုတ်ပါတယ် - ကျွန်တော်လည်း အဲ့ Link ကို ပေးပြီး နောက်တော့မှ ပြန်စဉ်းစားမိတယ် - ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ချိန်တုန်းက အဲ့လို link မျိုးကနေ Download ချနိုင်ဖို့ ချွေးပျံအောင် ကြိုးစားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ( ကိုယ် သုံးတဲ့ Windows တွေက Genuine မဟုတ်တော့ အဲလို links မျိုးတွေက Download ချဖို့ တော်တော် မလွယ်ပါဘူး ) အဲတာကြောင့် ကိုဝင်းအောင် Steps တွေ နားမလည်မှာ စိုးတာက တစ်ကြောင်း - တကယ်လို့ နားမလည်လို့ ပြန်လာမေး - ကျွန်တော်က ပြန်ဖြေနဲ့ Reply တွေများပြီး လိုရင်းမရောက်တော့မှာ စိုးတာက တစ်ကြောင်းမို့လို့ ကိုယ့်ဘာသာပဲ Download ချပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေသွားပါပြီ အစ်ကို..။အခုလို မနားတမ်းဖြေကြားပေးတဲ့ အတွက် အစ်ကို တခုခုတောင် ကျွေးချင်ပါတယ် ။ ကျေးဇူးတင်တာတောင်အားနားလှပါပြီးအစ်ကို။ တကယ်ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဂတုံးလေး, ဝင်းအောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, bonge, minthumon, Ye Aung
23-07-2010, 11:18 AM
ပို့စ်7ခုအတွက် 8 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
တခုလောက် အကူညီတောင်းပါရစေ ကို KznT ရေ။ ကျနော် ခု အစ်ကိုရဲ့ ၀င်းဒိုး ၂၀၁၀ကို boot CD ခွေတခွေ ဘန်းဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ခက်နေတာက သူက Boot Image Data တောင်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀င်းဒိုးခွေကို Boot Image Data ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြောင်းရမယ်ဆိုရတယ်။ တဆက်တည်း ISO File and Virtual Drive Format File ပြောင်းနည်းကိုပါ ကျနော်တို့ လို အခြေခံနည်းသူတွေ နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။
Last edited by နှင်းမောင်; 23-07-2010 at 11:19 AM..
Find More Posts by နှင်းမောင်
ကျွန်တော် သိပ်နားမရှင်းဘူး ကိုနှင်းမောင် ရ - ကျွန်တော် ၀င်းဒိုး ၂၀၁၀ ဆိုပြီး တစ်ခါမှ တင်မပေးခဲ့ဖူးသေးဘူး ထင်တယ် - ဘယ် အခွေကိုများ ပြောတာလဲ မသိဘူး - ကျွန်တော် တင်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ Windows ခွေတွေတော့ မရှိဘူးတော့ မဟုတ်ဘူး - ရှိပါတယ် - ဒါပေမယ့် အဲတာတွေ အားလုံးက Boot CD ဖြစ်ပြီးသားတွေချည်းပါ - ဘယ်နားက အခွေကိုများ ပြောတာလဲ မသိဘူး တစ်ချက်လောက် ညွှန်ပေးပါ့လား - သိပ်နားမရှင်းလို့ပါ။ နောက်ပြီး ISO File ပြောင်းနည်းဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် Virtual Drive Format File ပြောင်းနည်း ဆိုတာတော့ နားထဲ သိပ်မရှင်းလှပါဘူး - ကျေးဇူးပြုပြီး Virtual Drive Format File ပြောင်းနည်းဆိုတာကို ကိုနှင်းမောင် ဘယ်လိုနားလည်သလဲ ( ဆိုလိုတာ - Virtual Drive Format File တွေကို ဘယ်လို နေရာတွေမှာ တွေ့ခဲ့ဖူးသလဲ ) ဆိုတာရယ် သူ့ရဲ့ extensions က ဘာနဲ့ ဆုံးလဲ ?? ဆိုတာ တစ်ချက်လောက် ပြန်ပြီး ပြောကြည့်ပေးပါ့လား - တော်ကြာ ကျွန်တော်က ထင်ရာတွေ ပြောချလိုက်ရင် မေးတာနဲ့ ဖြေတာတွေ လွဲနေမှာ စိုးလို့ပါ။
Last edited by KznT; 23-07-2010 at 11:35 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, minthumon
23-07-2010, 01:15 PM
တည်နေရာ: မန္တလေး မှာနေ ပါ တ
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 16 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဖိုင်တွေတင်ချင်လို့ ဘယ်လိုတင်ရလဲဟင် mp3 ပါ တရားခွေပါ တခါမှ မတင်ဘူးလို့ပါ
Find More Posts by orange.lay405
23-07-2010, 01:31 PM
ဟုတ်ကဲ့ပါ - orange.lay405
Thread နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖိုရမ်နဲ့ သက်ဆိုင်တာ ဆိုရင် ဖိုရမ်မှအခက်အခဲများ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍလေးမှာဖြစ်ဖြစ် - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကွန်ပြူတာ အခက်အခဲနဲ့ ပတ်သတ်တာ ဆိုရင် အခြားအခက်အခဲများ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍလေးမှာဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နိုင်ရင် မေးပေးစေချင်ပါတယ်။ ပြဿနာလေးတွေ တစ်ခုတစ်စည်းတည်း ပေါင်းထားသလို ဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ တကယ်လို့ Files တွေကို Upload တင်ချင်တယ် မျှဝေချင်တယ် ဆိုရင် လုပ်ဆောင်နည်းတွေကတော့ အများအပြား ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ Multiple File-Hosting Sites များအကြောင်း နဲ့ အုပ်ချုပ်သူ ကိုပိုင် ဆွေးနွေးထားတဲ့ စနစ်တကျအပ်လုဒ်တင်ကြမယ်... ဆိုတဲ့ Thread ကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါ။ နောက်ထပ် Uploading site တွေပြောင်းရအောင် ဆိုတဲ့ အုပ်ချုပ်သူ ကိုရဲအောင် ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို လည်း ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖိုရမ်မှ အခက်အခဲများ ကဏ္ဍမှာ orange.lay405 မေးထားတာကိုပဲ ကူညီကြပါ File တွေ Upload မလုပ်တတ်လို့ပါ ဆိုပြီး မေးထားတာ ရှိပါသေးတယ် - အဲတာကိုလည်း ဖတ်ကြည့်ပေးပါ။ အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ဖိုင်တွေ ဘယ်လို Upload တင်ရမယ် ဆိုတာ နားလည် နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
Last edited by KznT; 23-07-2010 at 01:40 PM..
ဂတုံးလေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, arkaraung, hellboy, minthumon, tu tu, Ye Aung
23-07-2010, 04:09 PM
ပို့စ်5ခုအတွက် 11 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Brother can you upload nero 10 in mediafire . ၂ ပိုင်းလေး ခွဲတင်ပေးပါလား ခင်ဗျာ။
Find More Posts by ဖက်တီး
23-07-2010, 05:51 PM
Originally Posted by KznT
ဒီလိုပါ ကို Kzn T ရေ. အစ်ကို နားမရှင်းဘူးဆိုတာ ကျနော် ကောင်းကောင်း မပြောပြတတ်လို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်အောင် ပြောရရင်။ virtual drive format file ဆိုတာ ကျနော် နားလည်သလို ပြောလိုက်တာပါ။ virtual drive ထဲထည့်ပြီး သုံးလို့ရအောင် ကျနော် သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီက Myanmar Encyclopedia CD ရထားပါတယ်။ ပုံစံလေးက တြိဂံစီဒီပုံလေး ဖြစ်ပြီးတော့။ VCD file လို့ပြပါတယ်။ အဲဒါလေးကို ကျနော် အလွယ် virtual drive format လို့ပြောလိုက်တာပါ။ ခွေနဲ့ မသုံးဘဲ ဆော့ဝယ်စီဒီအချို့ကို virtual drive ထဲထဲ့ သုံးချင်ပါတယ်။ အဲလိုသုံးလို့ရအောင် ဘယ်လိုရမယ်ဆိုတာကို သိချင်တာပါ။
နောက်တခုကတော့ ၀င်းဒိုးခွေပါ။ ၂၀၁၀ ၀င်းဒိုး အိပ်စ်ပီလို့ အလွယ်ပြောပေမယ့် အပြည့်စုံကတော့ Windows.XP.Sp3.NASA.2nd.Generation.2010 ဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကို တင်ပေးထားတာလို့ ထင်ပါတယ်။ သေချာအောင် လိုက်ရှာပေမယ့် လိုင်းမကောင်းတာကြောင့် အတိကျမပြောနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။
လိုရင်းပြောရရင် ဆော့ဝဲ တခုကို iso file ဖြစ်အောင်၊ virtual drive နဲ့ အသုံးပြုနိုင်အောင်၊ boot CD အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်အောင် ရှေးဦးစွာ ဘာတွေလုပ်ဖို့ အပ်တယ်ဆိုတာ သိချင်တာပါ... ကို KznT ရေ။
Last edited by နှင်းမောင်; 23-07-2010 at 05:52 PM..
how to, user guide
Microsoft Office 2010 အတွင်းရှိ ဆန်းသစ်မှုများ KznT Software များဆိုင်ရာ404-07-2010 10:25 PM
Software installation in Ubuntu 10.04 LTS KznT Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ008-06-2010 12:14 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 09:01 AM